Nidaamka kaydinta cufan, roogagu waa qaybta ugu muhiimsan. Nidaamka kaydinta degdegga ah ee bilowga ah ayaa badanaa loola jeedaa dhammaan noocyada qaababka loo yaqaan 'rack', oo ay ku jiraan wadista gaadhiga, loox dhabarka riixida, kuraasta culeyska, wiishka mobilada iyo wixii la mid ah. Intaa waxaa sii dheer, dadka qaar ayaa sidoo kale u tixgeliya ASRS sidii hirgelinta kaydinta degdegga ah. Si kastaba ha noqotee, waa in la tilmaamaa in ASRS inta badan loogu talagalay in lagu wanaajiyo ka faa iideysiga meelaha bannaan, oo aasaasi ahaan ay kaga duwan tahay qaababka kaydinta culus ee kor ku xusan.
Nidaamka Raadinta Raadiyaha Raadiyaha wuxuu isku daraa astaamaha looxyo kala duwan. Kaliya ma leh sifooyinka degdegga ah ee wadista baabuurta dhexdeeda, laakiin sidoo kale waxay garan kartaa baahida loo qabo kantaroolka otomaatiga. Forklift, shuruuda ayaa aad u yar isla markaana cufnaanta kaydinta ayaa ka sarreysa tan meerayaasha culayska. Howlaha FIFO ama FILO waa kuwo si dabacsan loogu dooran karo iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah. Iyo sababta oo ah gawaarida gawaarida xamuulka, waxay aad ugu habboon tahay keydinta qabow iyo bakhaarada kale ee aadka u xun, si loo yareeyo howlaha shaqaalaha, loo hagaajiyo hufnaanta shaqaalaha iyo amniga hawlgalka. Raadinta Raadiyaha Raadiyaha wuxuu qaalisan yahay kan ka sarreeya kuwa guud ahaan sababtoo ah rakibidda qalabka kontaroolada otomatiga ah, saxnaantiisa iyo dayactirkiisuna sidoo kale waxay leeyihiin shuruudo aad u sarreeya.
Marka la barbar dhigo nidaamyada kale ee keydka cufan, Nidaamka Raadinta Raadinta Raadiyaha iyo ASRS waxaa lagu gartaa isticmaalka gaari-wadista. Gaariga Shuttle waa robot caqli badan oo ka shaqeeya tareenka. Waxay xaqiijin kartaa howlaha keydinta, keydinta iyo meeleynta iyada oo hoos imaaneysa nidaamka. Waxay la xiriiri kartaa kumbuyuutarka martigeliyaha ama nidaamka WMS ama kontoroolka marinka gacanta lagu haysto. Waxay xaqiijin kartaa shaqooyinka aqoonsi otomaatig ah iyo helitaan iyadoo la mideynayo tikniyoolajiyadda RFID iyo koodhka barafka.
Nidaamka Raadinta Raadiyaha Raadiyaha wuxuu ka kooban yahay baabuur xamuul ah, xarriijin iyo hagaha toosan ee hagaha tareenka iyo maareynta. Mabda 'shaqeyntooda ayaa ah in dejinta tareenka taraafikada ee jihada qolka weyn, kaliya alaabooyinka loo baahan yahay in la dhigo dhamaadka hore ee tareenka hagida markii la keydinaayo, iyo gaariga koontaroolada fogfog ee koontaroolka laga hago ee tareenka hagaha si toos ah u qaada. pallet-ka wadada tareenka haysa oo dhig. Qaybta ugu hooseysa ee tareenka haga, gaariga xamuulka ah wuxuu alaabada baska ah dhigaayaa wadada hore ee tareenka hagida markay alaabada qaadayaan, gaariga gaariga lagu ordo ayaa qaadi kara. Nidaamka Raadinta Raadiyaha Raadiyaha wuxuu xaqiijin karaa labadaba FIFO iyo FILO. Nidaamka shaqada ee nidaamka wuxuu la mid yahay kan wadooyinka qadiimka ah ee meelaha lagu ciyaaro, laakiin kuma eka oo keliya qotada dheer. Xaddigeeda meel wax ku ool ah ayaa la isticmaali karaa ilaa 90% ugu badnaan, iyo heerka isticmaalka goobta sidoo kale waxay gaari kartaa in ka badan 60%, taas oo ku guuleysan karta cufnaanta ugu badan ee cabbiridda aag kasta.
Asal aamisan , Suuqa Suuqa , Xarig , Wadada Shanaad , Qalabka Birta , Xidhitaanka lakabyo Badan ,